Ahmed Madoobay oo war culus soo saaray kana hadlay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ahmed Madoobay oo war culus soo saaray kana hadlay
Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo munaasabadda furitaanka madasha badbaado qaran ka hadlayay ayaa sheegay in wali uusan wax xiriir ah ka helin madaxda dowladda federaalka.
“Caawa ayaa 11 habeen ii ah inta aan magaalada Muqdisho joogo, ma joogtaa iyo ma timid, nimanka mas’uuliyadda sheeganaya ee guddiyo ayaa shiraya leh, xitaa su’aal la isma weydiinin. Inaan joogo iyo inaan… anaa isu jooga anaa isu imid,” ayuu yidhi.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in howsha lagu aasaasay Madasha badbaado qaran loo arkay inay xal ka noqon karto Xaalada cakiran ee Doorashada dalka, taasoo ilaa hadda ay muuqato inaan lahaynin wado sax ah oo dalka lagu jihayn karo.
Wuxuu intaas ku daray Madaxweynahu in loo baahan yahay in si rasmi ah loogu diyaar garoobo sidii xal looga gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha taagan iyadoo la eegayo danta Qaranka.
Ilaa hadda laguma guuleysanin in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay ku heshiiyaan hannaanka doorashada, iyadoo wali uu khilaaf ka taagan yahay qodobbada qaarkood.
Previous articleYaa kala gooyay Kaartadii Qof & Cod ?
Next articleGalmudug oo kulan la qaatay masuuliyiinta Maamulka Soomalida ee Etoobiya
Mid ka mid ah maxaabiista jeelasha Mareykanka ayaa geeriyooday kaddib markii ay neefta ku dhegtay, xilli ay booliisku wejiga dhulka ugu qabteen, mid ka...
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ee ka...
Wasaaradda Gaashaandhigga Itoobiya oo xayiraad ku soo rogtay gobollada deegaanka...